Bayaanka marin u helka - Finentry
FINENTRY Bayaan marin u helid
Bogga finentry.fi waxuu ku saabsan yahau sharciga adegga uu bixiyo ee dijitalka ah (306/2019). Halkaan ogga adeegga internetka HUS (Helsinki iyo Uusimaa degmooyinka ku midoobay bukaan daryeelka / Cusbitalka Jaamacadda Helsinki). Waxaannu doneeynaa, in aay isticmaalayaal badani aay isticmaali karayaan adeegga dijitalka ah.
Bayaanka kan ee marin u helka waxuu ku saabsan yahay bogga finentry.fi. Bayaanka kan waxaannu ku sheegi halka aad ka heleeysid bogga iyo sida aad jawaabo inagu soo gaarsiin kartaan ee khuseeya adeegga.
Adeeggan dijitalka ah helitaankiisu waxaa qiimeeyay horumariyaha bogagga internetka Into-Digital dhisember 2020. Qiimeeyntaasi waxaa aasaas u aheyd hadba sida uu boggu u buuxinayo sida sharciga uu dalbayo ee ah AA-heerka shuruudaha helitaanka (WCAG 2.1).
Ka warcelinta helitaanka
Waanu idinka guddoomeeynaa arrimmaha iyo talo soo jeedinnada wax hagaajinta ah ee xagga helitaanka bogga.Waxi warceli ah waxaad nagu soo gaarsiineeysaan xagga e-mailka oo cinwaankiisu yahay finentry@hus.fi. Noogu sheeg farriinta, waxa aad ka warcelineeysaan bogga ee ku saabsan (www-cinwaan) oo haddaba sawir cad ka bixiya.
Haddi aad ka dheehato bogga mushkilad xagga helitaanka ah, marka horeba soo gaarsii cidda bopgga howshiisa gacanta ku heeysa. Jawaabuhu waxeey qaadan karaan 14 maalmood. Haddii aadan ku qanacsaneeyn jawaabta aad heshay ama aadanba helin jawaab laba wiig gudahood, waxaad haddaba wargelin kartaa wakaaladda maamulka koonfurta Finland. Wakaaladda maamulka koonfurta Finland boggeeda ayaad ka heli macluumaadka la xiriira, sida aad wargelinta u sameeyneeysid iyo sida aay u lafoguri doonaan.
Maamulka kormeeraya halka lagala xiriirayo
tel. 0295 016 000 (barta telefoon gudbinta)
waxaa la qaabeeyay 10.12.2020